यस्ता गल्तीले मृगौलामा पर्न सक्छ गम्भीर असर - Dainik Nepal
यस्ता गल्तीले मृगौलामा पर्न सक्छ गम्भीर असर
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर १७ गते १४:२८
एजेन्सी । हाम्रो शरीरमा रहेको महत्वपूर्ण अंगमध्येको एक हो – मृगौला (किड्नी) । मृगौलाले हरेक दिन १२० देखि १५० लिटर रगत र १ देखि २ लिटर पिसाब छान्ने गर्दछ । हामीले दिनभर गर्ने विभिन्न गल्तीहरुले हाम्रो महत्वपूर्ण अंग मृगौलामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यदि समयमै यस्ता गल्तीहरुलाई सुधार गर्न सकिए मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार यी गल्तीका कारण मृगौलामा गम्भीर असर पर्न सक्छः
१. पिसाब रोकेर राख्नु
पिसाब रोकेर राख्नाले मुत्रथैली भरिएर फुल्छ । यस्तो भएमा युरिन रिफ्ल्क्स अर्थात पिसाब फेरी मृगौलातर्फ नै फर्किएर जान्छ । जसबाट ब्याक्टेरियाको संक्रमण भएर मृगौलामा असर पर्छ ।
२. कम वा धेरै पानी पिउनु
दैनिक रुपमा ८ देखि १० गिलास पानी पिउन अन्त्यन्त आवश्यक छ । यो भन्दा कम पानी पिउनाले शरीरमा जम्मा भएको विकार पदार्थले मृगौलामा असर गर्दछ । त्यस्तै गरेर धेरै मात्रामा पानी पिउनाले पनि मृगौलामा दवाब पर्न जान्छ ।
३. धेरै नुन खानु
खानामा धेरै नुन खानाले या अधिक नुनिलो खानेकुरा खानाले मृगौलामा असर पर्छ । नुनमा हुने सोडियमले रक्तचाप बढाउँदछ । यसबाट मृगौलामा नकरात्मक असर पर्दछ ।
४. अनावश्यक औषधी खानु
सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या देखिएको अवस्थामा पनि एण्टीबायोटिक वा पेन किलर (दुखाई कम गर्ने औषधी)को सेवन गर्ने बानीले मृगौलामा गम्भीर असर पार्दछ । डाक्टरको सल्लाहविना यस्ता औषधीको सेवन गर्नु हानीकारक हुन्छ ।
५. धुम्रपान या सुर्ति सेवन गर्नु
धम्रपान गर्नाले तथा सुर्तिको सेवन गर्नाले शरीरमा बिकार वस्तुहरु जम्मा हुन थाल्दछ । यसले रक्तचाप पनि बढाउँछ । जसको नकरात्मक असर मृगौलामा पर्छ ।